Ungeza kanjani i-SEO eminingi yezilimi?
Namuhla, cishe wonke umuntu osebenza iwebhusayithi yezohwebo angaphumelela ukusebenzisa isitolo somkhiqizo noma umhlinzeki wesevisi ku-Intanethi. Kwabonga ukubonga ngamandla amakhulu eWebhu, okuvumela ukuthi noma yikuphi osomabhizinisi be-intanethi ukuthi abe nezigidi zabantu abathengi emhlabeni wonke. Futhi ukukhuluma nezilaleli ezilimini eziningi ngaphesheya kwemingcele kuzodinga ukuthi wena wengeze i-SEO yezilimi eziningi kuwebhusayithi (ngaphandle kwe-SEO yomhlaba wonke).
Ngaleyo ndlela, ukusebenzisa i-Search Engine Optimisation efanele emazingeni amaningi (international) kungashesha ngokuphumelelayo nakakhulu kune-SEO yendawo ehlosiwe. Akusho ukuthi uma ufaka i-SEO yamazwe omhlaba kuwebhusayithi, uvele uvule umnyango emazweni amaningi angamanani amaningi eprojekthi yakho ye-intanethi (ikakhulukazi uma kuqhathaniswa nezenzo zokuhweba ezenziwe ngezitini nezokuthutha). Ukuyithatha kalula - isidingo sokwengeza i-SEO kwiwebhusayithi evumela ukuba ivele futhi iqondiswe ezilalelini zomhlaba zakamuva nje kuFANELELA kunoma yiliphi umnikazi webhizinisi eliku-intanethi, elizimisele futhi lilungele impumelelo enkulu kakhulu.
Ngaphambi kokuba uqale
Okokuqala, ngaphambi kokuba uthathe isinqumo esifanele ukwengeza i-SEO kuwebhusayithi ezingeni lamazwe omhlaba, kuzodingeka uzenzele njengomholi ophethe insimu ethile yemakethe. Uma ibhizinisi lakho elisha seliqedile lo mgomo oyinhloko ngolimi olulodwa, izinto ezilandelayo okufanele zenziwe ziphuma ukukhuluma nakwezinye izilaleli ezihlosiwe nakwamanye amazwe. Ngokusobala, leyo nqubo iqala ngokuhumusha amakhasi akho wewebhu zibe ulimi lwesibili nolwesithathu, ngenkathi ukhumbula engadingeki kakhulu ukufaka i-SEO kuwebhusayithi ezingeni ngalinye elilandelwayo. Ngakho-ke, ekugcineni masicabangele lolu daba isinyathelo ngesinyathelo.
Into eyodwa ngesikhathi
Ngokuvamile izinkampani ziyashesha ukuvula amawebhusayithi azo ngezilimi eziningi kusukela ekuqaleni. Uma ucabanga ukuthi unesabelomali esikhulu kakhulu sokuqala kwesikhathi, umqondo ungase uzwakale uzwakalayo. Kodwa lapha kuza isixwayiso. Cabanga, siphumelele ngempumelelo isitolo sewebhu esiboniswa phezulu kwamakhasi omphumela we-injini yokusesha (i-SERP), isibonelo ngesiNgisi. Futhi ingabe kukhona isiqinisekiso sokuthi izinguqulo zethu zangaphandle, isibonelo, zihunyushwe ngesiSpanishi noma ngesiJalimane, ukuze zenze futhi? Angicabangi. Ngakho-ke, kufanele siqale nini lokhu kwandiswa kwezilimi eziningi? Ngikholelwa ukuthi isikhathi esihle kakhulu uma usuvele usuqalisile futhi ugcine ukugcina iwebhusayithi ephumelelayo ngesiNgisi:
Yiba nesimo sewebhu sebhizinisi esisebenza kahle ngesiNgisi
Beka ilungelo gxila kwisakhiwo se-CMS kanye nesakhiwo sewebhu
Yiba smart ukuqala ulimi olulodwa kuphela ngesikhathi (ukwenza kanjalo, uzoba nesikhathi esanele ukwengeza SEO website kuwelolo, ngakho-ke uthole simo ehlukile ku-SERP ngaphambi kokungena ezingeni elilandelayo lemikhakha eminingi)
Phatha ucwaningo olufanele lwegama elingukhiye kolunye ulimi oluhlosiwe ohlela ukulifaka (ngaleyo ndlela, khetha amagama angukhiye kuphela abalulekile aphethe ithrafikhi eliphezulu, kodwa namanje ukuncintisana komzimba)
Inguqulo ngayinye esanda kuhunyushwa yewebhusayithi yakho kufanele ibandakanye okungenani amabhulogi akho ebhulogi, nanoma yikuphi okuqukethwe okuhlangenwe nakho (yenza ngokushesha ngangokunokwenzeka, ngenkathi ukhuthaza amakhasi akho wewebhu ngokusebenzisa umkhankaso wokwakha isixhumanisi) 21)
Hlola kabili u-contr ol phezu kwento yonke
Ukuhamba ngezilimi eziningi, kufanele ucabangele ukuthatha uhlelo olulodwa olunobungane lokuphathwa kokuqukethwe (i-CMS). Asikho isidingo sokusingatha yolwazi oluningana ngezikhathi ezithile, njengoba ngincoma ukugcina i-CMS efanayo ukuhumusha okuqukethwe kwakho ngokuphindaphindiwe. Kunezinhlelo eziningi zesimanje zokuphathwa kokuqukethwe ezikuvumela ukuba udale amawebhusayithi amaningi ngezilimi ezahlukene ukwabelana nge-database eyodwa. Phakathi kwabanye, ngiphakamisa ukuthi usebenzisa okulandelayo: Joomla, Magento, WordPress, noma iDrupal. Ngaleyo ndlela, ungaba nezinzuzo ezinhle, kanje:
unciphise isikhala sokubamba, ngezindleko zokubamba ezishibhile kakhulu (khumbula, i-Google akenzi umehluko endaweni yakho yokuhlala, njengoba injini yokusesha isebenzisa ezinye izimpawu ukuze ubonise izilaleli zakho ezihlosiwe)
ukulawulwa kwesitoreji esiphezulu ngezihumusho ezahlukene noma amawebusayithi amaningi
ukubuyekezwa ngokugcwele kuwo wonke amawebhusayithi akho ngesikhathi esisodwa, uma kufanele uphathe ukuhlelwa kabusha noma ukuthuthukiswa komuntu oyedwa
Ngincoma ngokucubungula okukhethwa kukho okulandelayo ukwakha isayithi lakho lewebhu:
Izizinda eziphezulu kanye nezwe ezikhokhelwe (isibonelo.
Isizinda ngasinye sezinga eliphakeme lomhlaba wonke kufanele sibe nezizinda ezincane
ezifolda ezigciniwe eziza kuzo zonke izizinda ezingaphansi komhlaba
Cabanga ngemingcele ye-URL
) Lawula ulimi ngamakhukhi
Ngokuqondene nami, ukukhetha izizinda ezibhalwe ezweni ukufaka i-SEO kuwebhusayithi kunezinzuzo ezimbalwa. Ukuba ne-geotargeting yezwe kuhle ukufaka uphawu, njengoba wonke umsebenzisi uzokutshela ngaso leso sikhathi, ukuthi ibhizinisi lakho lamazwe ngamazwe lingathí sina ngokwanele ukugxila esimweni ngasinye ngabanye. Ngemuva kwakho konke, igama lesizinda elicebile ngamagama angukhiye lingadluliselwa kalula ezweni ngalinye ukwenza ukukhushulwa kwe-intanethi kumkhiqizo wakho noma isevisi yakho egxilile kakhulu (inothi, le nketho ngeke yenze, uma ubhekene nezigaba eziningi, esezivele zikhona sigxile egameni elilodwa elingukhiye noma ibinzana eliyinhloko).
Okunye okunye okwenziwe nge-optimization izinto engangizisebenzisa ukungeza i-SEO kwiwebhusayithi yami.
Ukuba ne-database eyodwa ye-CMS inhle kakhulu. Kodwa kusadingeka ukuhlola uma ukucushwa konke kulungile ngokugcwele. Ngaleyo ndlela, ungasebenzisa amathegi we-hreflang etshela i-Google ukuthi yiliphi ulimi (hhayi ilizwe) lelo khasi ngalinye lewebhu elibhalwa empeleni.
Ngokucabangela ezinye izici ezihunyushwe ngokukhethekile, ikakhulukazi mayelana nokusetshenziswa kolimi olungenasici oluhlonishwa yi-Google, kufanele usebenzise kuphela uhlelo lolokubhala olunembile kakhulu kuwo wonke amasayithi ewebhu lakho. Kodwa ukuhlolisisa ngokujulile ngaphawula ukuthi imithetho yegrama ingase inganakiwe ngezinye izikhathi, kuphela ngokuqondene nokusebenza kahle kwezobuchwepheshe. Ngisho ukuthi amawebhusayithi amaningi anesimo esiphakeme ngokuvamile asebenzisa amagama amaningi angukhiye angalungile noma imishwana, okwamanje ibonakala iyasebenza futhi ifaneleka. Ngakho-ke, ngincoma ukulandela imithetho eqondile yohlelo lwezigaba zakho ezigcwele zombhalo, nakuzo zonke izindawo. Mane ukhumbule ukuthi ku-Metadata yakho, ama-URL, ne-Anchor umbhalo okhululekile ukubeka ukugxila okukhethekile emabintweni abalulekile angasesha kuphela, kunalokho uhlelo lwabo lolimi.
Ekuphetheni, ngingathanda ukuwuqokomisa futhi - ngokusebenzisa ukuhumusha okuvamile ngokuvamile ukweqa izinto eziningi ezibucayi indlela engcono kakhulu yokwengeza i-SEO kuwebhusayithi. Ukufezekisa ukuhlelwa kwezwe elihle kakhulu ekusetshenzisweni kwezilimi ezimbili, ngincoma ukuthi kube nokuhumusha kwewebhu kuphela, okuhlanganisa ukuhlanganiswa kokuxhumanisa okuphelele kanye nocwaningo olunzulu lwegama elingukhiye. Futhi ungalokothi ugijimele ukuzama ukumboza izilimi eziningana ngesikhathi esisodwa, njengoba ibhizinisi langaphandle eliphumelelayo e-inthanethi lidinga ukwenza konke okuqhubekayo, into eyodwa emva kokunye Source .